eBay အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် XAPK（28.1MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် eBay: Discover great deals and sell items online
သင်နှစ်သက်သောအမှတ်တံဆိပ်များပေါ်တွင်အရောင်းအ0ယ်များကို0ယ ်. ရောင်း။ ရှာဖွေပါ။ eBay app ကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်. စတင်ရန်ဆိုင်းအင်လုပ်ပါ။
eBay အသစ်? မှတ်ပုံတင်မည်ယခုနှင့် eBay ကိုစျေးကွက်အပေါ်ဝယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းများပျော်ရွှင်မှုရှာဖွေတွေ့ရှိ
ဝယ်နဲ့အရောင်းရဆုံး - သင်တို့အဘို့အပလီကေးရှင်းအလုပ်စျေးဝယ်သည့် eBay ကိုအောင်: ။
• GET app ကို-သီးသန့်ကမ်းလှမ်းမှု အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ခြင်းများကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ။ •ကုန်ပစ္စည်းအားလျင်မြန်စွာနှင့်လုံခြုံစွာမြန်ဆန်စွာရှာဖွေပါ။ •သင်၏အွန်လိုင်းစျေးဝယ်သည့်အမှာစာများကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီစစ်ဆေးရန်။ •အလွယ်တကူမက်ဆေ့ခ်ျကို0ယ်သူများ။ •သင်၏ eBay, သင်၏လမ်း - သင်၏ settings ကို dark mode, စိတ်ကြိုက်သတိပေးချက်များနှင့်အခြားအရာများကဲ့သို့သောအင်္ဂါရပ်များဖြင့်ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ပါ။
, တီဗီများနှင့် ပိုမို.
• လက်တော့ပ်များ, နားကြပ်များ, မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများနှင့် ပိုမို. ရှာဖွေတွေ့ရှိသည့်နည်းပညာဆိုင်ရာအချက်အလက်များနှင့် ထပ်မံ. အသိအမှတ်ပြုပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောထုတ်ကုန်များအပေါ်ငွေပြန်အမ်းခြင်းနှင့်အခက်အခဲများအခမဲ့ရရှိသည်။
ဥယျာဉ်, အရောင်းအ0ယ်အရောင်းကဒ်များနှင့်နောက်ထပ်
•အိမ်နှင့်ဥယျာဉ် - Tools, Smart Home Gadgets, မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများနှင့်အခြားအမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ၏အဝတ်အစားများ၌သင်ကြိုက်နှစ်သက်သောဖက်ရှင်အမှတ်တံဆိပ်များကိုအမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားအဝတ်အစားများဖြင့်0ယ်ယူပါ။
•ကုန်သွယ်ရေးကဒ်များ - ရှားပါးသောစပျစ်သီး, စပျစ်သီးနှင့်ကုန်သွယ်ရေးကဒ်အသစ်များအတွက်သင်၏ရပ်တန့်ဆိုင်ကိုလေ့လာပါ။
အဲဒါရိုးရှင်းပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့၏ eBay Money-back အာမခံချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ site ပေါ်တွင်အရာအားလုံးနီးပါးနှင့်သက်ဆိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လွတ်လပ်သောစစ်မှန်ကြောင်းအတည်ပြုခြင်းကသင့်အားအစမှအဆုံးအထိစိတ်ငြိမ်သက်မှုကိုပေးသည်။ နာရီများမှစနီကာများနှင့်ကင်းစင်စွာဖြင့်သင်စစ်မှန်သောအာမခံချက်ဖြင့်လုံခြုံစွာ0ယ်ယူနိုင်သည်။ သင်၏လမ်း။
eBay ၏တက်ကြွသောစျေးကွက်တွင်အသုံးဝင်သော0ယ်ယူမှုအမျိုးမျိုးကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပါ။
သည်သင်၏အွန်လိုင်းစျေးဝယ်ခြင်းအတွေ့အကြုံကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဆုကိုရရှိခြင်းမှောင်မိုက်သော mode feature ကိုတိုးမြှင့်ပါ။ ဖွင့်ရန်သို့မဟုတ်ပိတ်ရန် Menu Icon> Settings> Theme> Theme> Themode> Settings> Them Mode ကိုသာနှိပ်ပါ။
B >> B> BAY SARE BADGE:
ငါတို့ကို မင်းကိုတွေ့ရင်မင်းကိုမင်းအများကြီးသိနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးမားသောစျေးနှုန်းတံဆိပ်များကိုကြည့်ပါ။
eBay Marketplace တွင်။
Image Clean-up :
eBay> eBay> eBay သည်သေးငယ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ - ရောင်းသူနှင့် Access အစွမ်းထက်အရောင်းရဆုံးကိရိယာများနှင့်ထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့အသိုင်းအဝိုင်း join
ရောင်း Sneaker $ 100 နဲ့တက်: အရည်အချင်းပြည့်မီ Sneaker အပေါ်
Pay ကိုအဘယ်သူမျှမရောင်းအခကြေးငွေပစ္စည်းများ၏ စတင်. စျေးနှုန်း $ 100 ဖြစ်ပါတယ်အခါ။ သို့မဟုတ်ထိုထက်မကသောရေကြောင်း, ကိုင်တွယ်ခြင်း, အခွန်သို့မဟုတ်အခကြေးငွေများအပါအ0င်မဟုတ်ပါ။
သင်၏အကြံဥာဏ်များနှင့်အကြံပြုချက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်တကယ်အရေးကြီးသည်။ twitter @ashebay သို့မဟုတ် https://www.ebay.com/android ကိုထိတွေ့ပါ
ဘာအသစ်လဲ eBay: Discover great deals and sell items online 6.9.6.3
How To Search & Find The Cheapest Items On eBay | Tutorial
Ko Phyo gyi